10 mahatalanjona Vintage Disneyland sy Disney World Poster
Fianakaviana Theme Parks
Fantasyland Classic Rides
Ity dia tanin'ny saina, fanantenana ary nofinofy. Ao amin'io tany tsy manam-potoana io, ny taonan'ny fifandirana, ny majikika ary ny finoana-mino dia tonga teraka indray ary ny mofomamy dia tanteraka. Fantasyland dia natokana ho an'ny tanora sy ny tanora ao am-pony, ho an'ireo izay mino fa rehefa maniry ny kintana ianao dia tanteraka ny nofinao.
- Walt Disney, tamin'ny fisokafan'i Disneyland tamin'ny 1955
Ho an'ireo mpankafy Disney manerana izao tontolo izao, Fantasyland no fo sy fanahy amin'ny Disney Parks rehetra, tany am-piandohana tany Disneyland ao Anaheim, Kalifornia, tamin'ny 1955 ary taty aoriana tao amin'ny Magic Kingdom tao amin'ny Walt Disney World tany Orlando, Florida, tamin'ny 1971. tena malaza any amin'ireo lohahevitra rehetra ireo, Fantasyland dia mirehareha foana ny fiarovan-tena sy kiddie malemy fitetezam-paritra taorian'ny sarimihetsika Disney natao ho an'ny ankizy, anisan'izany ny Dumbo ilay Elefanta Flying and Mad Tea Party.
Tamin'ny 2012, Disney dia nanokatra fanta-daza lehibe fanta-daza sy niova fo tao Walt Disney World tany Florida ho anisan'ny lehibe indrindra amin'ny famokarana tantara 41-taona ao amin'ny park. Ny haben'ny Fantasyland dia nivelatra teo amin'ny 10 ka hatramin'ny 21 hektara, ka nahatonga ny trano fisakafoanana vaovao antsoina hoe "Our Our Guest", izay miorina amin'ny sarin'ny Beast's Castle. Ny Fantasyland vaovao koa dia nampitombo avo roa heny ny fahafahan'i Dumbo ny Flying Elephant ary nampiana fiara roa vaovao, teo ambanin'ny Ranomaso-Ranomasin'ny Mermaid Little And The Six Dwarfs Mine Train.
Ny Fihetseham-panoheran'ny Snow White
Avy amin'ny sarimihetsika malaza nataon'i Disney "Snow White sy ny Seven Dwarfs", io fiakarana maizina io dia niasa tao Disneyland hatramin'ny andro nisokafany tamin'ny taona 1955. Naverina indray ary naverina indray tamin'ny 1983 ny dikan-teny ankehitriny. Disney parks any Paris sy Tokyo.
Iray amin'ireo fiaramanidina malaza indrindra any Disneyland, ny Matterhorn Bobsleds coaster izay nisokatra tamin'ny 1959. Eo amin'ny sisin-tany eo anelanelan'i Tomorrowland sy Fantasyland, ny lamasinina dia misy ifandraisany amin'ny Matterhorn, iray amin'ireo tendrombohitra avo indrindra any Alpes, any amin'ny sisintany eo anelanelan'i Soisa sy Italia. Izy io no fiara fitaterana an-dalambe voalohany ary nametraka ny fenitra ho an'ny fanorenana maoderina androany.
Angamba ny zavatra kanto indrindra amin'ity afisy ity dia ny tsy fisian'ny toe-tsaina intsony. Nandeha tany Disneyland tamin'ny 1959 ny fisotroan-dronono ambanin'ny ranomasina, ary nikatona nandritra ny efa-polo taorian 'ny taona 1998 tany ho any. Niverina indray ny fanatanjahantena indray ary naverina indray tamin'ny 2007 ny Finding Nemo Submarine Voyage .
Tany kely izany
Sambatra (na voaozona) miaraka amin'ny moron-dranomasina izay tsy azonao atao afa-tsy ny hampihorohoro, Tontolo madinika dia fiara fitateram-bahoaka maizimaizina any amin'ny faritra fanta-daza any amin'ny Disney Park rehetra eran'izao tontolo izao. Ny lohahevitra nentim-paharazana amin'ny kolontsaina marolafy, dia nipoitra voalohany tao amin'ny Fair World World ny taona 1964 alohan'ny nampidirana an'i Disneyland tamin'ny taona 1966.
Efa ela i Johnny Depp no ​​nanoratra ny Kapiteny Jack Sparrow teo amin'ny efitrano volomparasy, dia niady hevitra momba ny dikan-tsoratr'io aloky ny fahamaizinana malaza io i Disneyland tamin'ny taona 1967. Io no fanintelony farany niarahan'ny Walt Disney, izay maty telo volana talohan'ny nisokafany.
Tamin'ny 2006 i Disney dia nanomboka nampiditra sarimihetsika avy amin'ny sarimihetsika "Pirates of the Caribbean" ho an'ireo sariitatra tany Disneyland, Disney World ary iraisam-pirenena Disney Parks.
Raha nanomboka tamin'ny taompolo 1950 ny voa ho an'ny fanangonam-ponenana, dia tsy tamin'ny nahafatesan'i Walt Disney ihany no nampidirin'i Disneyland tamin'ny 1969 ny Haunted Mansion ho an'ny besinimaro. Misy an'io fanintonana io koa ao amin'ny Disney World any Florida sy Disney hafa zaridaina manerana izao tontolo izao.
Misokatra nanomboka ny taona 1971, ny rafitry ny Monorail an'ny Disney World dia rafitra fitateram-bahoaka izay mivezivezy eo amin'ireo zaridaina Disney sy ny Magic Kingdom sy Epcot theme parks. Ny Disneyland dia manana Monoraila manokana, izay niasa nanomboka tamin'ny 1959.
Hatramin'ny alàlan'ny fiara fitaterana an-dàlambe Espace voalohany nosokafana tamin'ny taona 1975 tao amin'ny Disney World, dia nampidirina amin'ny alàlan'ny Disneyland sy ny Disney Parks manerana izao tontolo izao ny dikan-teny hafa.
Hatramin'ny voalohan-dry zareo tany Disneyland tamin'ny taona 1979, ny Big Thunder Mountain Railroad dia nandositra ny fiarandalamby fiarandalamby ho lasa mpankafy ihany koa any amin'ireo parc de Disney any Orlando, Paris, ary Tokyo.
Afisy Ny karazan'ireo Disney Parks
Te hianatra bebe kokoa? Poster Art of the Disney Parks , avy amin'i Daniel Handke sy Vanessa Hunt, dia manambara ny ambangovangon'ny sarimihetsika tsara indrindra Disney rehetra isaky ny folo taona ary mahavariana tsara ny latabatry ny fantsonan'ny Disney Fan.
Inona no atao hoe Roller Coaster Airtime?
Toeram-piantsenan'ny Indoor ao Amerika Avaratra
Raiso am-boninahitra eo am-baravarankely ny minisitry ny fanararaotan'ny Universal aho
Ny Cedar Point Park dia maneho fahatsorana sy bebe kokoa
Inona no vaovao amin'ny toeram-pijerem-biby sy fialam-boly?
Misafidiana ny volonao any New England
Preview an'ny Royal Cruise Ship Princess
Fivarotana mora azo tany Ohio State Park Lodges
Explore the Neighborhoods of the Long Island
Zavatra tsy fantatrareo momba an'i Sacramento, Californie
Fomba fankalazana ny Paska any Rosia
Ny vola ao Bali
Farmington River Tubing dia kongresy Connecticut
Ny Andron'i St Patrick any Albuquerque
Ny hotely tsara indrindra any Tacoma
5 mozika mena any Manhattan
Ny tsara indrindra any Angletera? Ny mpamaky dia miteny